पानीले उर्जा र जीवन दिन्छ, नेपालमा पानीका मुहान सुकेका छैनन् ! – मन्त्री भट्टराई – PathivaraOnline
Home > समाचार > पानीले उर्जा र जीवन दिन्छ, नेपालमा पानीका मुहान सुकेका छैनन् ! – मन्त्री भट्टराई
मंसिर ०४, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा फेरि नेकपा विवाद चुलिएकाे अवस्था छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य एबम् पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पछिल्लो समय नेकपाका हरेक कार्यकर्ताले पार्टी बिभाजनको पीँडा भोगिरहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै ‘हिमाल पारीको संकेतबाट जुट्ने वा मैदान पारीको सकृयताबाट फुट्ने’ यो मान्यता नेकपाको शरीरमा फीट नहुने सोच वा औषधी भएको उनको तर्क छ ।
नेकपाका युवा नेता भट्टराईले चीनका राजदूत यांछीको पहलका कारण भएको भन्ने कुराको प्रतिबाद गरेका हुन् सक्छन् । नेता भट्टराईले एमाले र माओवादीबिचको एकताबाट बनेको नेकपा बिभाजनको इतिहासलाई क्रमभङग गरी एकताको इतिहास् निर्माणको परिणाम भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टीमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालबीको द्वान्द्वको सीमा नाघेपछि चिनियाँ राजदरुतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी थिईन् । उक्त कुराको नेकपाबिभत्रसमेत ब्यापक छलफल भईरहेका बेला नेता भट्टराईको प्रतिकृया आएको हो । नेकपामा बिदेशी हस्तक्षेप छैन भन्दै उनले भनेका छन्, ‘घरेलु (नेपाली)बिउ, मल र हावापानीले उम्रिएको, हुर्किएको, बढेको र फैलिएको पार्टी हो नेकपा । यसको बिकास र बिस्तारमा कुनै आयातित मल, बिउ र प्रबिधिको प्रयोग गरिएको छैन ।
नेकपा जैविक र नेपाली बिशेषताको मौलीक पार्टी हो ।’ उनले नेकपाको बिकास वा बिनास नेकपाभित्रै अन्तरनिहित भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा प्रत्येक सदस्यका दुई हातमा पानी कि पेट्रोल ? पेट्रोलले उर्जा, पानीले उर्जा र जीवन, नेपालमा पानीका मुहान सुकेका छैनन्!’
नेता भट्टराईको स्टाटस् फेसबुकबाट जस्ताकाे तस्तैः
समस्या मेरी श्रीमतीमा होइन, ममा छ!
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाइ यसरी धन्यवाद दिए प्रधानमन्त्री ओलीले!
काममा आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई बिच सडकमा दिइयो यस्तो सजाय (भिडियोसहित)